Eyona Bhlogi intengiso
EyonaBhlogi ibalaseleyo yokuThengisa!
NgeCawa, Meyi 9, 2010 NgeCawa, Meyi 9, 2010 Douglas Karr
Kukho iibhlog ezintle zentengiso ngaphandle phaya, kodwa ndingathanda ukukholelwa ukuba oko sikudibanisileyo ngamanqaku aphambili kuwo onke amanqaku. Ngaba singcono? Akunakwenzeka ukuphikisa, akunjalo? Ngokuqinisekileyo-sinokusebenzisa inani lababhalisi, abalandeli, abalandeli kunye nothando ukuzama ukumisela ... kodwa ayisosalathiso se eyona, Esi sisalathiso se oyithandayo or okudume kakhulu.
Ukuxela ukuba inkampani yakho, imveliso yakho okanye inkonzo yakho yeyona nto ibalaseleyo inokuba yenye yezona ndlela zokukhuthaza zakha zakho ngenxa yezizathu ezimbalwa:
Abantu bayakholelwa. Abantu baya kukunika isibonelelo sokuthandabuza kunye nentando ufuna Ukukholelwa into oyithethayo iyinyani. Abezopolitiko bakufunda kwakudala oku… xela into abafuna ukuyiva abavoti, emva koko wenze nantoni na ofuna ukuyenza xa usiya e-ofisini.
Sisiprofeto esizalisekisayo. Ukuthi okona kulungileyo kuya kuba yinyani xa uyikholelwa. Uqala ukuzibamba kumgangatho ophezulu kwaye uhlala uqinisekisa ukuba ugqamile phakathi kwabakhuphisana nabo.
Ibeka ukhuphiswano kwezokhuseleko. Ngelixa uqhubeka nokuvuna izibonelelo zokuba zezona zibalaseleyo, ukhuphiswano lwakho lushiyekile ukuzama ukubonisa ukuba ngokwenene abekho kwindawo yesibini.
Ndibuzwe kule veki ukuba ingaba eli yayiliqhinga lokukhohlisa. Andikukhuthazi ukukhohlisa kwaye ndiyayicekisa ipolitiki njengesiqhelo. Endaweni yoko, ndikhuthaza abantu kunye neenkampani ukuba bazithengise njengezona zilungileyo- kwaye bahambise kolo lindelo.
Umzekelo obalaseleyo woku liqela elenza iMali kwi-Intanethi labathengisi abakwi-Intanethi. Abakhuthazi kuphela iisayithi zabo kunye nezixhobo njengezona zibalaseleyo, bakwatyala imali kakhulu ekwenzeni eyona nto bayiyo uninzi lwabantu abaphumeleleyo kwi-intanethi. (Ngokwam, ndicinga ukuba ukuthengisa kwabo kubhetele kuneziphumo zokutyala iinkonzo zabo… kodwa olo luluvo lwam kuphela.)
Yintoni ekuyekisayo ekusebenziseni eli qhinga? Chaza eyona nto uyiyo kwaye uqale ukuyazisa namhlanje.
Ividiyo: Imithombo yeendaba yeNtlalontle 2
Meyi 20, 2010 kwi-8: 15 PM
Ndinebhongo ngokuba yinxalenye yeBlog yeTekhnoloji yokuThengisa!